Ogaden News Agency (ONA) – Mudane Faarax Macalin – Somalida Ogadenia waxay u dagaalamayaan xoriyadooda siday ugu soo dagaalameen madawga Koonfur Afrika (Filim)
Mudane Faarax Macalin – Somalida Ogadenia waxay u dagaalamayaan xoriyadooda siday ugu soo dagaalameen madawga Koonfur Afrika (Filim)
Posted by ONA Admin	/ March 19, 2012
Afahayeenka Baarlamanka Kenya Faarax Macalin ayaa Ethiopia ku sheegay inay aheyd Gumeysi sidoo kale eegana tahay mida Geeska Afrika ku gal-galatay ee Awooda Sheeganaysa. (hoosta Hoose ka daawo Filimka)
Wareysi dheer oo Faarax macalin ay la yeesheen Capital Talk, ayaa waxaa faarax macalin lagu weydiiyay Su’aalo faro badan Waxuuna kaga hadlay
Ogadeniya iyo NFD waxay kukala gadisanyihiin.
Dagaalka Kasocda Somaliya ee Dowlada Kenya ku qaaday
Dhibaatada Dhex taala Ethiopia iyo Eritrea
Iyo Arrimaha Geeska Afrika
Haddaba wareysigan oo luqada Ingiriiska ah ayaad hoos ka daawan kartaan, Waxaana kasoo qaadaneyna.
Ogadeniya iyo Qadiyada Somalida Kenya waxay kukala gadisnaayeen
Isaga oo ka hadlaya dhulka somaliyeed ee kamidka ah Kenya iyo Dhulka Ogadeniya. Faarax Macalin waxa uu ka bixiyay taariikhdii dhulkaas Somaliyeed ay Kenya ugu biirtay midka kalena uu gacanta Ethiopia u hoos galay.
NFD hadaan ku horeyno waa ka gadisantahay qadiyada Ogadeniya waayo. Waqtigii Gumeysiga, waxaa Ingiriisku uu haystay 43 qabiil dhulkooda oo maanta ah dhulka Kenya. Qabiiladaas waxaa kamid ah Qabiilka Somalida (NFD) waxaa kale oo jira qabiilo kale sida Turkaana, oromada, dhagiro iyo kuwo kale oo badan oo dhamaantood qabiladooda kale ay wadan kale dagan yihiin sida Sudan, Uganda. Markii Gumeysigu uu baxayay ee Xoriyada uu siinayay dadkaas, Gumeysigu waxa uu go’aansaday qabiiladan Afrikaanka ah innuu halwadan ka dhigo oo xornimo ay saas ku qaataan.
Ogadeniya arintaas kama dhicin. Marka hore Ogadeniya waxaa gumeysanayay Ingiriiska (sida NFD oo kale). markii uu gumeysigu baxayay dhulkaas muusan siinin xoriyad ee waxa uu ku wareejiyay Gumeysi kale oo ah Ethiopia. Ethiopia waxay kamid aheyd waqtigaas Boqortooyoyinka caalamka ka jira ee wax gumeysta. Ogadeniya waxaa mar qabsaday Talyaniga markii dagaalki labaad laga adkaaday, dhulka Ogadeniya waxaa dib loogu wada wareejiyay Gumeysiga Ethiopia.
Gumeysiga Ethiopia waxa uu ahaa wadan ka qeyb qaatay kala qeybsigii Afrika shirkii Berlin. Halkaas oo ay qeybtooda ku heleen.
Sidaas awgeed shacabka Ogadeniya waxay leeyihiin. Ethiopia waa gumeysigii ugu danbeeyay ee caalamka ka jiray, waxayna wali gumeysanayaan Ogadeniya oo ah wadanka kaliya ee xoriada ka qaadan gumeystayaashii jirjiray. Waana arrin sharci ah oo logic ah, waana sheeko aan ka dhicin caalamka oo illa hada la arag kasokow Qadiyada Ogadeniya.
Hadda waqtigan aan joogno Somalida Ogadeniya waxay u daggalamayaan Xoriyadooda sidii ay Madowga Koonfur Afrika ugu dagalamayeen xoriyadoda, sidii ay Namibia ugu daggaalamayeen xoriyadooda. Sidaas awgeed shacabka Ogadeniya waxay xaq u leeyihiin inay xoriyadooda u dagalamaan waana mid sharciyan waafaqsan.
Faarah Macalin waxa kale oo uu sheegay in Dowlada Kenya iyo Dowlada Ethiopia waqtigi Xeyle selassie ay kala saxeexdeen heshiis aha mid Difaac, oo haddii wadanka Kenya ama Ethiopia midkood Somaliya soo weerarto in labada wadan isu hiiliyaan (maadama labaduba laba dhul oo Somali ah ay heysteen).
Balse qadiyada Somalida Kenya iyo Mida Ogadeniya waa kala gadisan tahay, Heshiiskii noocaas ahaana hadda waa la bur buriyay oo waxba kama jiraan weeye.
Siyaasada Kenya ee Arrimaha Dibada waa in lagu dabaqa hada waxii ka danbeeya xaaladahaas dareenka Somaliyeed. Maanta Dowlada Somaliya ma raadinayso Somali weyn waxii la odhan jiray. Qadiyadena iyo mida Ethiopiana waa inaynaan isku qasin oo innoo kala cadahay.
(Dhulka Ogadeniya ayaa illaa hada ku hoos jira Gumeysi waxaana dadkiisu u dagalamayaan Xoriyadi sidii ay ku heli lahaayen ugana hoos bixi lahaayen Gumeysiga)